Denmark:-Maamulka Madarasada Daarul Quraan ee magaalada Copenhagen ayaa codsi u diraya Hooyo walba iyo Aabe walba iyo walaal walba waxayna si naxariis leh uga codasnayaan in ay ka qeyb qaataan Mashruuc ay wado Madarasada Daarul Quraan ee magaalad Copenhagen kaas oo ah in laga farxiyo 1000 Agoon Maalinta Ciida Arafo (Ciidul Adxaa). Agoonkiiba waxaa ka farxin kara $30 .
Hadaba walaal maanta wax hormarso si aad bari u heshid ajar aad u tiro badan . Lacagta waxaa lagu soo diri karaa Accountka oo aad ka dhex heli doontid Clipka ama waxaad ku soo diri kartaa Xawaaladaha adigoo ku soo qoraya (Agoon Ciida).
Madarasada Daarul Quraan Copenhagen, Tel: +45 40978140.Wixii su’aalo ah ama faah’faahin intaa ka badan kalagala soo xairiiir Emailka madarasadda. daarulquraan@hotmail.com.ama Telka Madarasada Daarul Quraan Copenhagen, Tel: +45 40978140. Si aad u heshid ajar barabadan fadlan u dir Qofwalba oo Muslim ah.
Maamulka Madarasada Daarul Qu,aan